iOS 9.3 dia nitondra ny kaontin'ny mpampiasa tamin'ny iPad ihany, na dia misy nuances | Vaovao IPhone
Izy io dia zavatra iray nangatahan'ny mpampiasa efa ela: afaka manana kaonty mpampiasa marobe amin'ny iPad. Ary miaraka amin'ny Beta voalohany an'ny iOS 9.3 Apple dia nanapa-kevitra ny hanampy an'ity asa ity, na dia misy nuances aza: ao amin'ny tontolon'ny sekoly ihany. Ity kinova vaovao ity dia hahafahan'ny mpianatra maromaro mizara iPad any am-pianarana ary samy manana ny fotoany avy, mba tsy afangaro amin'ireo tahiry hafa ny angonao. Ireo sy ny fanatsarana hafa mikendry ny sehatry ny fanabeazana dia ho tonga miaraka amin'ny fanavaozana manaraka ho an'ny iPad ary holazainay aminao momba izany etsy ambany.
Ho fanampin'ny kaonty mpampiasa marobe ho an'ny mpianatra, Apple dia nanampy fampiharana vaovao ho an'ity Beta voalohany an'ny iOS 9.3 ity mba hahafahan'ny mpampianatra mitarika ny mpianatra mandritra ny lesona, manombatombana ny fivoarany ary manara-maso tanteraka ny anjarany. Nasiana vavahady iray ho an'ireo mpitantana izay ahafahana mamorona kaonty Apple haingana be, ary karazana Apple ID vaovao koa noforonina hampiasaina amin'ny fanabeazana. Zahao izay ao amin'ny iPad an'ny mpianatra amin'ny iPad an'ny mpampianatra, na alefaso ny atiny avy amin'ny iPad an'ny mpianatra mankany amin'ny efijery iray amin'ny alàlan'ny AirPlay Zava-misy ankehitriny miaraka amin'ireo fiasa vaovao nampidirin'i Apple ao amin'ny iOS 9.3. Tsy isalasalana fa asa vaovao sy mahaliana maro izay hanampy ny iPad hamerina ny toerana very ao anatin'ny sehatry ny fanabeazana.
Mety ho fandriana andrana tsara ho an'ny sasany amin'ireo vaovao ireo ny hivoahana amin'ny fanabeazana ary hahatratra ny mpampiasa rehetra. Afaka mifehy ny zavatra jeren'ny zanakao amin'ny iPad amin'ny iPhone-nao, na ireo kaonty mpampiasa voalaza etsy ambony miaraka amin'ny mombamomba azy ireo ary ny famerana ampifanarahana amin'ny mombamomba azy tsirairay avy dia mety ho vaovao izay tsy isalasalana fa nahafaly ny ankamaroan'ny tompon'ny takelaka Apple ary, maninona no tsy tonga amin'ny iOS 10.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 9 » Ny iOS 9.3 dia mitondra kaonty ho an'ny iPad amin'ny iPad ihany, na dia misy nuances aza
Vaovao tsara misimisy kokoa, mpamaky fonja: iOS 9.3 koa mora tohin'ny jailbreak
Ireo daholo ny vaovao ho tonga ao amin'ny iOS 9.3